Abafokazi abangama-48,000 abangekho emthethweni bayanyamalala ngemuva kokudedelwa e-United States
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » I-USA Izindaba Ezintsha » Abafokazi abangama-48,000 abangekho emthethweni bayanyamalala ngemuva kokudedelwa e-United States
Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • Ubugebengu • Izindaba zikaHulumeni • Human Rights • Izindaba • Abantu • Unomthwalo wemfanelo • Ukuphepha • Ezokuvakasha • Izindaba Zocingo Lokuhamba • ezithrendayo Manje • I-USA Izindaba Ezintsha
Ukukhathazeka kwabafokazi abangekho emthethweni kuphindeke kathathu kwaba ngaphezu kwezigidi ezingu-1.7 onyakeni wezimali kahulumeni ophele ngoSepthemba 30, 2021, ngokusho kwedatha ye-US Customs and Border Protection (CBP).
Cishe ama-48,000 abafokazi abangekho emthethweni, abadedelwe e-United States ngu Ukuphathwa kweBiden esikhathini esiyizinyanga ezinhlanu ngo-2021, manje abasakwazi ukulandeleka ngemuva kokuziba umyalo wokungena neziphathimandla zezokufika zaseMelika.
Amashumi ezinkulungwane zabafika kwamanye amazwe ngokungemthetho badedelwe bayiswa e-US ngaphansi kohlelo oluklanyelwe ukusheshisa ukucutshungulwa kokukhuphuka kwethrafikhi yabafuduki.
Kulabo bantu abangabafokazi abangekho emthethweni abacishe babe ngu-104,000 abanikezwe izaziso zokubika (NTRs) phakathi komhla zingama-21 kuNdasa no-Agasti 31, 2021, abangaphansi kuka-50,000 bahlangabezane nesibopho sabo sokungena nehhovisi lenkundla yabokufika zingakapheli izinsuku ezingu-60, ngokusho koMnyango Wezokuphepha Kwasekhaya (DHS). ) idatha evele izolo.
Abanye abangaphezu kuka-54,000 bashaye indiva imfuneko yokubika kwabe-Immigration and Customs Enforcement (ICE), okuhlanganisa abangaba ngu-6,600 umnqamulajuqu wabo wezinsuku ezingama-60 wawungakaphelelwa yisikhathi ngesikhathi kuhlanganiswa idatha.
"Imininingwane ye-DHS ikhombisa ukuthi umkhuba wokukhipha ama-NTR ube ukwehluleka ngendlela exakile," kusho uSenator wase-US uRon Johnson (R-Wisconsin), osanda kuthola izibalo ephendula incwadi ayithumele kuNobhala we-DHS u-Alejandro Mayorkas ngo-Okthoba odlule.
Ukusetshenziswa kwama-NTR kwaqala ngoMashi 2021, lapho abantu abaningi abangabafokazi abangekho emthethweni babefika eningizimu. US emngceleni i-DHS ewudingayo ukuze kudambiswe ukuminyana ezikhungweni zokuboshwa. Ngaphambi kwalokho, abafuduki abadedelwa bangena ngaphakathi kweMelika ukuze balinde ukudingiswa banikezwe izaziso zokuvela (NTAs). Lokho kwakusho ukubeka izinsuku zenkantolo zabafokazi abangekho emthethweni, okwakudinga imibhalo eyengeziwe kanye nesikhathi sokucubungula.
Kepha ukunikezwa i-NTA kukude kakhulu nokudingiswa, njengoba uhlelo lokufika kwabantu e-US ludume kabi lusekelwa, futhi abafuduki abaningi bavele benqabe ukuvela enkantolo yabo. UJohnson waphawula ukuthi ngisho nakubamukeli abacishe babe ngu-50,000 be-NTR ababike kwa-ICE njengoba babeyalelwe, bangaphansi kuka-33% abanikezwe ama-NTA, okusho ukuthi abakabi nalo usuku lwenkantolo oluzayo futhi bangahlala e-US unomphela.
Abamukeli be-NTR abangama-54,000 abalahlekile bebephakathi kwabafokazi abangaphezu kuka-273,000 abaphathi beBiden ababadedele ezweni. US kusukela ngoMashi odlule kuya ku-August. UJohnson uthe labo bafuduki babhekene namathuba amancane okususwa. Ngokungeziwe kulabo abakhishelwe ama-NTA noma ama-NTR, abaningi bakhululwa e-US ngaphandle kwanoma yiziphi izimfuneko zesaziso noma izinsuku zenkantolo.
Ukuwela imingcele ngokungemthetho kwehle kwafinyelela irekhodi eliphezulu ngemuva kokuba uBiden ethathe izintambo ngoJanuwari odlule futhi ngokushesha waqala ukwembula izinqubomgomo zokuphoqelela zikaMongameli owamandulele uDonald Trump. Ukusatshiswa kwabantu abavela kwamanye amazwe ngokungemthetho kuphindeke kathathu kwaba ngaphezu kwezigidi eziyi-1.7 ngonyaka wezimali kahulumeni ophele ngoSepthemba 30, ngokusho kwedatha ye-US Customs and Border Protection (CBP).
Ukukhathazeka kwe-CBP kukhuphuke kwafinyelela eminyakeni engama-61 onyakeni wekhalenda ka-2021 ngemuva kokwehla kwaya eminyakeni engama-45 ngaphansi kwezinqubomgomo zikaTrump ngo-2020.
Izibalo ze-CBP azibandakanyi isibalo esingaziwa sabantu abavela kwamanye amazwe abawela umngcele ngaphandle kokuboshwa.